पहिचान भिन्न हुनु के पाप हो? कहिले सम्म हरेक क्षेत्रबाट बञ्चित रहने एलजिबिटिआइक्यु? - MitiniNews :- Nepali News Portal | Information
Home/आत्मकथा/पहिचान भिन्न हुनु के पाप हो? कहिले सम्म हरेक क्षेत्रबाट बञ्चित रहने एलजिबिटिआइक्यु?
आरशु श्रेष्ठ, ट्रान्सम्यान
मेरो नाम आरशु श्रेष्ठ हो । बुवा अजय श्रेष्ठ र आमा गिता श्रेष्ठको कोखबाट २०५७ साल असार २२ गते काठमाण्डौको वागेश्वरी भन्ने ठाउमा मेरो जन्म भएको हो । बुवा, ममी, दिदी, भाई र म गरी हाम्रो ५ जनाको परिवार थियो । हामी मध्यम परिवारको जिवन निर्वाह राम्रो संगनै चल्ने गर्दथ्यो । सामन्य नोकरी जसबाट हामी सबैको गासबासको जोह गर्ने काम हुन्थ्यो । खुसी र सुखी परिवारनै थियो ।
महिला भएर जन्मीएको थिए तर हुर्कीदै बढ्दै जादा मेरो स्वभाव, कपडा लगाउने तरीका, हिड्ने, बोल्ने सबै आम महिलामा भन्दा फरक हुन पुग्यो । स्वभाव महिलाको जस्तो नभएर पुरुषको जस्तो मलाइ महशुस हुन्थ्यो । आफुलाई पुरुष जस्तो महशुस गर्थे । सबै कुरामा मैले फरकपना पाउथे । पुरुषले गर्न सक्ने सबै काम गर्ने आट म मा हुने गर्दथ्यो । केटा साथी मात्र हुन्थे । पविारमा मेरो ब्यवहारले समस्या हुदैजान लाग्यो । समाज, परिवारले केटा भएर केटा संग मात्र बोल्ने अनि घुम्ने र केटी भएर केटी संग मात्र घुम्ने हिन्ने गुर्नपर्छ भन्ने एउटा छाप हामीमा दिएको थियो ।
यौनिकताको आधारमा के गर्ने, के नगर्ने भन्ने कुराको प्रत्यक्ष असर हामी जो कोहीमा पनि रहन्थो र म पनि यसबाट अछुतो भने हुन सकिन । उमेर बढ्दै जाने क्रममा मेरो यौन झुकावमा परिवर्तन हुदै जान थाल्यो । म आफु महिला भएर महिलासंग मात्र आकर्षित हुन्थे तर मेरो लवाई भने आम पुरुष जस्तो थियो । म के हो ? कस्तो हो ? यावत कुराको खासै जानकारी म मा थिएन तर समाजले भने मलाई तेस्रोलिंगीको पहिचान दियो ।
घर परिवारले समेत मलाई यसै नजरले हेर्ने गर्दथ्थे । एकदम रुने, कराउने गरथे । के गर्ने ? कसो गर्ने भन्ने कुराले मलाई पिरोल्न थाल्यो । मलाई सहयोग गर्ने, हौसला दिने कोही थिएन । कहा जाने, के गर्ने अन्यौलता थियो । जसबाट म दिनानुदिन डिप्रेसनको शिकार हुदै जान थाल्य ।
थाइल्याण्ड मुभी हेर्नमा मेरो एकदम सौख थियो यहि मुभि हेरने बेलामा मैले आफु ट्रान्सम्यान हो भनेर थाहा पाय । मलाई एकदम गारो भयो । सबैजनाको नजरमा म राम्रो मान्छे थिइन तर झन यो कुरा थाहा हुदा के भन्ने कुराले पिरोल्दै जान्थो । म दिन दिनै शिकार हुदै गए । ५ कक्षा बाट डिप्रेसनको शिकार भएकोले पढ्न सकिन ।
स्कुलमा कपडा लगाउने क्रममा केटाको लुगा लगायो भनेर कक्षा ७ मा, म माथि कुटपिट स्कुलमा भयो । केटी भएर केटीको लुगा लगा अनि हाम्रो स्कुलले बनायको नियम भङग गर्ने काम नगर भनेर म माथि दबाब हुदै जान थाल्यो । म सक्दिन लगाउन, पुरुषको मात्र लुगा लगाउछु भनेर कुरा गर्दा स्कुलको नियम तोडेको, अटेरी भनि मलाई गाली गलोज गरी स्कुलबाट पढ्न नपाउने गरी पास बनाएर सदाको लागी स्कुलको ढोका बन्द गरिदिए ।
आफ्नो यौनिकताको कारणले विभिन्न समस्या भोग्दै समस्यामा परेको आफु झन नया समस्या आउदा मैले आफुले आफुलाई समाल्न सकिन र डिप्रेसनको अवस्था झन बढ्दै गयो । केही गर्न सक्ने अवस्थामा थिइन । के गछु ? कसो गछु ? आफैलाई थाहा हुदैन थियो ।
कतिपट्क परिवारलाईनै मैले मार्न समेत तयार भएको रहेछु मलाई केही थाहा हुदैन थियो । यही डरको कारणले म परिवारबाट टाढा हुन पुग्ये । समाज परिवार सबैबाट टाढा बसेर आफ्नो जिवनलाई आफ्नै तरिकाले सङघर्ष गर्ने सोच बनाय र घर छोडेर हिने ।
साथीको घरमा बस्दै आय । आफ्नो पेट पाल्नको लागी जे काम भेटीन्छ मैले गर्न थाले । मलाई सहयोग गर्ने ? मेरो अवस्था बुझदीने कोही थिएन । म एक्लै रुने, कराउने, डराउने गर्न थालेछु । मलाई अन्धकार मात्र राम्रो लाग्न थाल्यो । सहज थिएन मेरा लागी ति दिनहरु कती रात खाली पेट पटुका कसेर सुत्थे । कसलाई गएर आफ्नो ब्यथा सुनाउ कतै सहयात्री हातहरु मेरा लागी थिएन । घर परिवार र समाजबाट निकालिएर एक्लो सङघर्ष मेरो जिवनका ति दिनहरु सम्झदा आजपनि आखा भरिएर आउछ । म सम्हाल्न सक्दिन आफैले आफैलाई ।
एक्लै बस्ने क्रममा म महिला हो भनेर थाहा पाउने ब्यक्तिहरुले म माथि बलात्कार गर्न खोज्थे । मैले धेरै पटक भागेर आफुलाई बचाउन सफल हुन्थे । जिवनको तिता पल समाजको नाममा जन्म लिएका ति ब्वासाहरु जसले भावना त परै जायोस मौकाको पर्खाइमा बसने गर्ने गर्दथ्थे । समाजमा हिडडुल गर्न अनि काम गर्न समेत मलाई गारो हुदै गयो । मलाई बाच्न गारो थियो । यि समस्याहरु दिनदिनै मेरो आखा अगाडी घुमीरहन्थो र जिन्दगी देखी हार खाएर एकदिन मैले आफ्नो जिन्दगी समाप्त गर्ने निर्णय गरे र आत्महत्या गर्न निस्कीय । तर दैवको लिला, दिन नआयसम्म काल आउदैन रे हो त्यही उखान जस्तै भयो मै माथी मर्न सकिन मलाई बचाउने मानिस जसले मलाई यस समाजमा पुनः सङघर्ष गर्न बाध्य बनायो ।
घटनाहरु दिन दिनै मेरो मानसपटलमा घुमीरहने गर्दथ्यो । एक्लै हिडडुल गर्न, काम गर्न जान डर लाग्ने गर्न थाल्यो । यस्ता कुराहरुले मलाई गाल्दै लग्यो र दिनदिनै डिप्रेसनमा जादैगए । धेरै बिरामी भएको कारणले परिवारले के भयो भनेर म बसेको साथीको घरमा आएर मलाई उपचार गर्न लग्नुभयो । डाक्टरले फरक फरक रोग भनेर बताउथे ।
समयमा सही उपचार हुन सकेन । हाम्रो आर्थिक अवस्था कमजोर भएकोले पनि सोचे जस्तो राम्रो उपचार हुन सकेन । यो सबै मेरो फरक यौनिकताको कारणले समाजले दिएको रोग थियो । मेरो यौनिकतामाथी डाक्टरले हासोको पात्र बनाइदिने, सम्वेदनशील अंगमाथी छुने गर्नाले मलाई झन असुरक्षा महशुस हुन्थ्यो । म सबैकुरा सहेर उपचार गराउन बिवश भय । कसलाई भन्नु मेरो कुरा सुनिदिने, बुझिदिने कोही थिएन म लाचार भएर बस्थे र आफ्नो उपचार गच्छे अनुसारले हुदै गयो ।
केही समयको हस्पिटलको बसाइपछि म मा केही सुधार महशुस भयो र डिस्चार्ज गरी घर लगियो तर मेरो यौनिकताको कारणले घरबाट आफन्तको घरमा लाने निर्णय परिवारले गरे र मलाई आफ्नो पहिचान लुकाएर पोखरामा बस भने र त्यही राखियो । सायद मेरो लागी परिवारको सही निर्णय थियो होला त्यो, त्यहाको हावापानी, रहनसहनले मेरो स्वास्थ्यमा केही मात्रामा भएपनि सुधार हुदैगयो ।
समाजलाई मेरो बारेमा थाहा नभएर होला मलाई त्यहा बस्न सहज हुदै गयो ।
आफ्नो स्वास्थ्यमा धेरैनै सुधार भएको थाहा पायपछि परिवारले मलाई पुनः काठमाण्डौ लेरजानु भयो । मलाई कसैले लगाइदिएको थियो अब ठिक भयो भन्ने मेरो परिवारको सोचाइमा थियो । मेरो मनको उकुसमुकुसलाई नियाल्ने अनि बुझिदिने कोही भएन । मलाई सहज थिएन गारो भएको छटपटी मनमा अनेक प्रकारका कुराहरुले प्रश्न गर्ने जसको उत्तर म संग हुदैन थियो । यसरी टोलाउदा टोलाउदै गर्दा फेरी म पुनः एक्लोपना शिकार भैसकेको रहेछु । के दिन के रात सबै मेरा लागी समान थिए यसरी नी लाचार, ज्युदो लाशसरी मेरो जिवन बित्दै थियो ।
दिनहरु बित्दै जादा एकदिन मेरो साथीको दिदीले मितिनी नेपालकोे बारेमा मलाई भने हामी जस्तो ब्यक्तिको समस्याको निराकरण हुन्छ भन्ने सुनेर एकदम खुसी लाग्यो । अब समस्याको समाधान हुने खुसीले त्यसदिन रातभर निन्द्रा लागेन कहिले भोली होला र जाउला जस्तो भयो । मनमा कुरा खेलाउदा खेलाउदै रातले डाडा काटेर बिहानको घाम झुल्की सकेछ ।
हतार हतार तयार भएर निस्कीय । आफुजस्तो अरु त्यहा धेरै देखे छक्क परे के रहेछ यस्तो भने सबैजना संग चिनजान भयो र मैले त्यहा आफ्नो यौनिकताको बारेमा पूर्ण रुपमा बुझने अवसर पाय र हामी जस्तो समाज र घरपरिवारबाट निकालिएका ब्यक्तिहरुको सुरक्षागर्ने, बस्ने ब्यवस्था गरिदिने, सिपमुलक तालिमहरु दिने गरेको देखेर मलाई अब दुःखका दिनहरु सकियको आभाष भयो र मैले आफ्नो पूर्ण रुपमा पहिचान थाहा पाउन सफल भय ।
सक्षम हुदै गए र आफ्नो परिवार समाजलाई आफ्नो यौनिकताको बारेमा बताउन सफल भए । समाजले स्विकार नगरेतापनि मेरो परिवारले त्यस दिन देखी मलाई स्विकारनु भयो । युद्ध जितेको भान भयो । त्यती बेला मलाई महशुस भयो दोष मेरै रहेछ । मैले समयमा बुझाउन सक्ने भएको भय म माथी विभीन्न समस्या आउने थिएन तर ढिलो भयो सकिएको थिएन बुझाउन, सम्झाउन सके म त्यतीमा सारै सन्तुष्ट भये । भोगेका सबै पिडाहरु बिर्सीय र परिवारको अंगालोमा संगै हातमा हात मिलाएर हिड्ने अवसर पायकोमा मलाई भोगेको दुःख केही लागेन र परिवार संग संगै खुसी संग एकै ठाउमा बस्न थाले ।
रमाइलो संगै दिनहरु बित्दै थिए । एकदिनको कुरा हो म साथीहरु संग घुम्नको लागी काठमाण्डौबाट धरान तिर लागे । लामो समयपछि आफ्नो मितजु संग भेटेर एकदम खुसी भए । हामी रातभर धेरै कुराहरु एक अर्कामा साटासाट गरेर बसेम । रात बितेको पत्ते भएन । सबेरै हामी दुबै इटरी घुम्न जाने सोच बनायम र हामी तरारा भन्ने ठाउतिर लागेम । त्यसै क्रममा मेरो भेट निलम संग भयो । हामी सबैजना संगै खाजा खायम र छुटीएम । भोलीपल्ट कामको लागी म झापा जानुपरयो र बिहान सबेरैको गाडीमा हिडे त्यहाको काम सकेर साझ पुनः म धरान फर्किय ।
निलम तराराको स्थानियवासी रहिछिन् । मेरो मितजुले उसलाई राम्रो संग चिन्नु भएको रहेछ । हाम्रो भेट पुन हुने अवसर जुरयो जसबाट मेरो मनमा कौतुहल्ता थियो । किनकीन उनीसंग भेटने भन्ने शब्दले नै मनमा एउटा छुटै आन्नदको आभाष पलाएको देखेर म आफै—आफै अचम्बीत हुन्थे । मलाई उनको बारेमा केही थाहा थिएन तरपनि हाम्रो भेट भने निरन्तर हुन थाल्यो । यहि निरन्तर भेटको असर भनु या अरु केही म उ प्रति आकर्षीत हुन पुग्ये । मलाई भन्न डर लागेको थियो । उसको बारेमा केही थाहा थिएन् । उनी बाइ सेक्सुवल भन्ने थाहा पाय र हिम्मत गरे उसलाई प्रेम प्रस्ताव राखे उनले स्विकारीन म खुसीले पागल जस्तो हुन लागे ।
हिजोको दिनमा सबैबाट टाढा बस्नु परेको म, आज जिन्दगीमा सबैको सहयोग, माया सबै पायकोमा खुसीको सिमानै थिएन मेरो । हाम्रो दिनहरु बित्दै गयको थियो । दुबै खुसी थिएम । रमाइलो संग समयहरु कट्दै थियो । निलमको परिवार संग कुरा गरे तर उहाको परिवारले समाजको डरले हामीलाई स्विकारनु भएन । तर हाम्रो सम्बन्धमा कुनै आपती थिएन उहाहरुलाई । मैले मेरो परिवारलाई पनि हाम्रो सम्बन्धको बारेमा भने आमालाई फोन गरी आमा मैले हजुरहरुलाई बुहारी ल्यादीयको छु भने आमा खुसीले पागल हुनुभयो । बुहारीलाई काठमाण्डौ लेरआउनु भन्नु भयो र हामी दुबै काठमाण्डौ लागेम ।
परिवारको सबैजना उसलाई देखेर खुसी हुनुभयो । उनी पनि खुसीने भइन । हामी दुबै खुसी संगै आफ्नो समय बिताउदै छौ । उनको परिवारले पनि एकदीन हामी दुबैलाई घर बोलाउने वातावरण मिलाउनु हुन्छ भन्ने सकारात्मक सोचका साथ मितिनीमै काम गदै आफु जस्तो नखुलेकाहरुको पहिचानको लागी तालीम र सकारात्मक शिक्षा समाज, परिवार र समुदायको हकहितमा काम गदै अगाडी बढीरहेका छौ ।
समाज, परिवार र आफूले हिजोको दिनमा आफ्नो यौनिकता पूर्ण रुपमा थाहा नपाउदा जति समस्या भोग्नु परेको थियो । अब आउने पिढीमा हदसम्म सहजता हुनेछ । म जस्तै सबैजना फरक यौनिकताको भएकोले ब्वासाहरुको शिकार बन्न नपरोस । समयमै सम्बीधत उच्च निकायमा बस्ने विभीन्न विधामा आवद्ध अधिकार कर्मीहरुले यस समुदायका ब्यक्तिहरुको सुरक्षाका लागी कानुनी रुपमा दरै तरीकाले आवाज उठाउन अब ढिला गरेमा कहिले सकिदैन् ।
संविधानको धारामा उल्लेख गरीएको शब्दहरुलाई वास्तवीक जिवनमा लागु गर्न सकेमा मात्र सरकार सफल हुन्छ । हरेक क्षेत्रमा एलजिबिटीआइक्युको लागी कोटा छुटाइएमा अगाडी बढ्नमा सहज हुन्छ । योग्यता भएर पनि प्रस्तुत गर्ने ठाउ नहुदा हाम्रो मृत्यु संगै आफु भित्रको अनगिन्ती क्षमताहरु जलेर खरानी नबनोस
राज्य व्यवस्था समितीका सभापति आदरणिय शशी श्रेष्ठ सगँको छलफल
२४ चैत्र २०७५, आईतवार १२:२९
२०२१ को जनगणनामा यौनिक तथा लैङगीक अल्पसंख्यक समुदायका ब्यक्तिहरुको वास्तविक तथ्यांङक आउँने आशमा
३ भाद्र २०७६, मंगलवार ०९:२८